Single လေးတွေပဲရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုတာ…😇 – Trend.com.mm
Single လေးတွေပဲရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေဆိုတာ…😇
Posted on July 6, 2018 July 6, 2018 by Noel
သင်က အခု Single လား?ဒါဆို ၀မ်းသာလိုက်ပါ။Single တစ်ယောက်ဖြစ်ရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသင်သိပြီးသားဖြစ်မှာဆိုပေမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရနေတယ်ဆိုတာရော သိရဲ့လား?လေ့လာချက်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Single တစ်ယောက်မှာ ဒီလိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနေတယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကဲ ဘာတွေများလဲ…
Rs ရှိတဲ့လူတွေကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားပေးကြတယ်၊နှစ်သိမ့်ကြတယ်၊ဒါပေမဲ့ Single သမားတွေကတော့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်တိုင်ပင်နားခိုစရာ အုတ်မြစ်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။၂၀၁၅တုန်းကလေ့လာချက်အရ Single တွေက RS ရှိတဲ့လူတွေထက် တစ်ခြားသူတွေကိုပိုပြီးစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်တယ်၊နွေးထွေးမှုပေးနိုင်တယ်။တစ်ခြားသူတွေရဲ့အားကိုးတိုင်ပင်စရာတစ်ခုပဲလို့တွေ့ရပါတယ်။RS တွေရန်ဖြစ်ကြရင်လည်း Single တွေကိုပဲ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး
အကြံဥာဏ်တောင်းကြတယ်မဟုတ်လား။သူများကိုတောင် ဒီလိုမျိုးအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တစ်ခြားသူတွေထက်ပိုပြီးရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ကာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အားပေးနှစ်သိမ့်နိုင်မှာလည်းမလွဲပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခြားသူက လာပြီးနှစ်သိမ့်ပေးဖို့မလိုအောင် စိတ်က ကြံ့ခိုင်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ တစ်ယောက်တည်းသမားတွေက အကြွေးစနစ်တွေကင်းရှင်းပြီး ပိုက်ဆံတွေတောင်စုနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ယောက်တည်းသမားဖြစ်လို့ ချစ်သူအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်၊နှစ်ပတ်လည်လက်ဆောင်တွေပေးစရာမလိုဘူးဟုတ်။ကုန်ရင်တောင်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ကုန်မှာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှာပါ။ငွေကြေးပူပန်ရတဲ့ပြဿနာကင်းဝေးတာက နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုပါမောင်းထုတ်ပြီးသားပါတဲ့။ပူပန်မှုနည်းလေ ၊စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးလေပါပဲ။
ချစ်သူက ဖုန်းပြောမယ်ဆိုပြီးတစ်ညလုံးနီးပါးဖုန်းပြောကြတာမျိုး၊အိပ်ချိန်မှာမအိပ်ရပဲစကားပြောနေရတာမျိုးတွေမရှိတဲ့ဘ၀က Single ဘ၀ပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်းသမားတွေက ပျော်ရွှင်နေတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေထက်တောင် ပိုပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါတယ်တဲ့။အိပ်ရေး၀၀အိပ်ရပြီးအိပ်ချိန်မှန်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိပ်ရေးဝတဲ့အတွက်၊အိပ်ချိန်မှန်တဲ့အတွက်အသားအရည်မပျက်စီးပဲပိုပြီးတော့လှလာမှာပါ။
တစ်ခါတစ်လေ ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာတဲ့အခါ RS သမားတွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကူညီနိုင်ပေမဲ့ ကူညီပေးကြပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်းသမားတွေကတော့ကူညီမယ့်သူဆိုတာ မျှော်နေလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖြေရှင်းရင်း ဘယ်ပြဿနာပဲလာလာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအားကိုးတတ်သွားပါတယ်။တစ်ခုခုဆို ကူညီမယ့်သူကိုစောင့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။Self-sufficient singles for the win ပေါ့။
ချစ်သူမရှိတဲ့အတွက် အားလပ်ရက်တိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ချိန်တွေချည်းပါပဲ။အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်တည်းပဲခရီးသွားမလား၊ရုပ်ရှင်ကြည့်မလား။အားကစားသွားလုပ်မလား၊သင်တန်းအသစ်တက်မလား ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ချစ်သူကိုတိုင်ပင်နေစရာလည်းမလို၊ချစ်သူကခွင့်မပြုမှာလည်းပူပန်စရာမလိုပဲစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လည်းအချိန်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်လာမယ်။
ဒါက Single သမားလေးတွေအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။တစ်ယောက်ယောက်အတွက်ပူပန်စရာမလို၊စိတ်ပူစရာမလိုပဲ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေရတဲ့ တစ်ယောက်တည်းသမားတွေက ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာ ငြင်းနိုင်စရာမရှိပါဘူး။လေ့လာချက်တွေအရ လက်ထပ်ပြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေကပျော်ရွှင်မှုနည်းပါးတာကိုတွေ့ရပြီး တစ်ယောက်တည်းသမားတွေက ပိုပြီးပျော်ရွှင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ Single လေးတွေက RS သမားတွေထက်စိတ်ဖိစီးမှုပိုနည်းပါးပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို တစ်ခြားသူနဲ့တိုင်ပင်စရာမလိုပဲလုပ်ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ငွေကြေးအနေနဲ့လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲကုန်စရာရှိလို့ တစ်ခြားသူအတွက်ပူပန်စရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ Single လေးတွေက ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Single လေးတွေ Shake လိုက်ပါဦး ! 😇 တစ်ခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင် မျှဝေခဲ့ဦးနော်
သငျက အခု Single လား?ဒါဆို ဝမျးသာလိုကျပါ။Single တဈယောကျဖွဈရတဲ့ကောငျးကြိုးတှကေိုသငျသိပွီးသားဖွဈမှာဆိုပမေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျပွီးဒီလိုကောငျးကြိုးတှရေနတေယျဆိုတာရော သိရဲ့လား?လလေ့ာခကျြတှအေမြားကွီးလုပျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ Single တဈယောကျမှာ ဒီလိုကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှအေမြားကွီးရနတေယျဆိုတာတှခေဲ့ရပါတယျ။ကဲ ဘာတှမြေားလဲ…
Rs ရှိတဲ့လူတှကေတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျအားပေးကွတယျ၊နှဈသိမျ့ကွတယျ၊ဒါပမေဲ့ Single သမားတှကေတော့ စိတျညဈနတေဲ့သူငယျခငျြးတှအေတှကျတိုငျပငျနားခိုစရာ အုတျမွဈကွီးတဈခုပါပဲ။၂၀၁၅တုနျးကလလေ့ာခကျြအရ Single တှကေ RS ရှိတဲ့လူတှထေကျ တဈခွားသူတှကေိုပိုပွီးစိတျခှနျအားပေးနိုငျတယျ၊နှေးထှေးမှုပေးနိုငျတယျ။တဈခွားသူတှရေဲ့အားကိုးတိုငျပငျစရာတဈခုပဲလို့တှရေ့ပါတယျ။RS တှရေနျဖွဈကွရငျလညျး Single တှကေိုပဲ တိုငျပငျဆှေးနှေး
အကွံဉာဏျတောငျးကွတယျမဟုတျလား။သူမြားကိုတောငျ ဒီလိုမြိုးအားပေးနှဈသိမျ့ပေးနိုငျတဲ့အတှကျ တဈခွားသူတှထေကျပိုပွီးရငျ့ကကျြတညျငွိမျကာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပွနျအားပေးနှဈသိမျ့နိုငျမှာလညျးမလှဲပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့တဈခွားသူက လာပွီးနှဈသိမျ့ပေးဖို့မလိုအောငျ စိတျက ကွံ့ခိုငျပွီးသားဖွဈနပေါတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ တဈယောကျတညျးသမားတှကေ အကွှေးစနဈတှကေငျးရှငျးပွီး ပိုကျဆံတှတေောငျစုနိုငျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။တဈယောကျတညျးသမားဖွဈလို့ ခဈြသူအတှကျမှေးနလေ့ကျဆောငျ၊နှဈပတျလညျလကျဆောငျတှပေေးစရာမလိုဘူးဟုတျ။ကုနျရငျတောငျကိုယျ့အတှကျပဲကိုယျကုနျမှာဖွဈလို့စိတျခမျြးသာမှုရှိမှာပါ။ငှကွေေးပူပနျရတဲ့ပွဿနာကငျးဝေးတာက နှလုံးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ရောဂါတှကေိုပါမောငျးထုတျပွီးသားပါတဲ့။ပူပနျမှုနညျးလေ ၊စိတျဖိစီးမှုကငျးဝေးလပေါပဲ။
ခဈြသူက ဖုနျးပွောမယျဆိုပွီးတဈညလုံးနီးပါးဖုနျးပွောကွတာမြိုး၊အိပျခြိနျမှာမအိပျရပဲစကားပွောနရေတာမြိုးတှမေရှိတဲ့ဘဝက Single ဘဝပါပဲ။ တဈယောကျတညျးသမားတှကေ ပြျောရှငျနတေဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှထေကျတောငျ ပိုပွီးကောငျးကောငျးအိပျပြျောပါတယျတဲ့။အိပျရေးဝဝအိပျရပွီးအိပျခြိနျမှနျတာက ကနျြးမာရေးနဲ့ပတျသကျပွီးအကြိုးကြေးဇူးတှအေမြားကွီးရပါတယျ။အထူးသဖွငျ့အိပျရေးဝတဲ့အတှကျ၊အိပျခြိနျမှနျတဲ့အတှကျအသားအရညျမပကျြစီးပဲပိုပွီးတော့လှလာမှာပါ။
တဈခါတဈလေ ပွဿနာတဈခုကွုံလာတဲ့အခါ RS သမားတှကေ တဈယောကျကိုတဈယောကျကူညီနိုငျပမေဲ့ ကူညီပေးကွပမေဲ့ တဈယောကျတညျးသမားတှကေတော့ကူညီမယျ့သူဆိုတာ မြှျောနလေို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအတှကျ ကိုယျတိုငျကွိုးစားဖွရှေငျးရငျး ဘယျပွဿနာပဲလာလာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပဲအားကိုးတတျသှားပါတယျ။တဈခုခုဆို ကူညီမယျ့သူကိုစောငျ့နစေရာမလိုတော့ပါဘူး။Self-sufficient singles for the win ပေါ့။
ခဈြသူမရှိတဲ့အတှကျ အားလပျရကျတိုငျးက ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျခြိနျတှခေညျြးပါပဲ။အဲ့ဒီကိုယျပိုငျအခြိနျတှမှော တဈယောကျတညျးပဲခရီးသှားမလား၊ရုပျရှငျကွညျ့မလား။အားကစားသှားလုပျမလား၊သငျတနျးအသဈတကျမလား ကွိုကျသလိုလုပျလို့ရပါတယျ။ခဈြသူကိုတိုငျပငျနစေရာလညျးမလို၊ခဈြသူကခှငျ့မပွုမှာလညျးပူပနျစရာမလိုပဲစိတျအေးလကျအေးနဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးလို့ရပါတယျ။ကိုယျ့စိတျကွိုကျလညျးအခြိနျတှကေိုစီမံခနျ့ခှဲနိုငျလာမယျ။
ဒါက Single သမားလေးတှအေသိဆုံးဖွဈမှာပါ။တဈယောကျယောကျအတှကျပူပနျစရာမလို၊စိတျပူစရာမလိုပဲ စိတျအေးလကျအေးနဲ့ကိုယျလုပျခငျြတာတှလေုပျနရေတဲ့ တဈယောကျတညျးသမားတှကေ ပိုပွီးစိတျခမျြးသာရတယျဆိုတာ ငွငျးနိုငျစရာမရှိပါဘူး။လလေ့ာခကျြတှအေရ လကျထပျပွီးတဲ့မိနျးကလေးတှကေပြျောရှငျမှုနညျးပါးတာကိုတှရေ့ပွီး တဈယောကျတညျးသမားတှကေ ပိုပွီးပြျောရှငျတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
နိဂုံးခြုပျရရငျတော့ Single လေးတှကေ RS သမားတှထေကျစိတျဖိစီးမှုပိုနညျးပါးပွီး ကိုယျလုပျခငျြတာကို တဈခွားသူနဲ့တိုငျပငျစရာမလိုပဲလုပျရတဲ့အတှကျပိုပွီးပြျောရှငျရပါတယျ။ငှကွေေးအနနေဲ့လညျး ကိုယျကိုယျတိုငျအတှကျပဲကုနျစရာရှိလို့ တဈခွားသူအတှကျပူပနျစရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ကွညျ့မယျဆိုရငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော၊ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအရပါ Single လေးတှကေ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။
Single လေးတှေ Shake လိုကျပါဦး ! တဈခွားအကြိုးကြေးဇူးတှလေညျးရှိတယျဆိုရငျ မြှဝခေဲ့ဦးနျော
တစ်မိနစ်အတွင်း ဒီပုံတွေထဲမှာ ဘာတွေလွဲနေလဲဆိုတာရှာနိုင်လား